ပိတ်ပင်ထားသော အသုံးပြုသူများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပိတ်ပင်ထားသော အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို ရှာရန်
အိုင်ပီလိပ်စာ သို့ အသုံးပြုသူအမည် -
ပထမဆုံး စာမျက်နှာပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာနောက်စာမျက်နှာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာ
၀၁:၄၅၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈ 203.135.190.3 (ဆွေးနွေး) ၀၁:၄၅၊ ၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၈
၁၆၄ ရက်, ၁၃ hours နှင့် ၄၆ minutes left Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စာမျက်နှာများကို ဖန်တီးခြင်း
၀၆:၃၅၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ Stop killing innocent Rohingya civilians! (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၆:၃၅၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ Myanmar must stop killing Rohingya people (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၆:၃၄၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ Myanmar army committed war crime for killing innocent Rohingya civilians (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၆:၃၄၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ Revoke Aung San Suu Kyi's Nobel Peace Prize (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၆:၃၄၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ Myanmar, just accept Rohingya as humans, not dogs and rubbish (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၆:၃၄၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ Demand justice for Rohingya people (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားရန်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၁၁:၃၀၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ Ngaluumathar (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၃:၁၉၊ ၂၃ ဇွန် ၂၀၁၇ Khaing Su Wai FB (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု
၁၁:၄၆၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၁၇ Ei Nu Wai (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု: Special:AbuseFilter/8
၁၁:၄၃၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၁၇ ခိုင္ဆုေဝ (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
၁၆:၄၀၊ ၃၁ မေ ၂၀၁၇ 45.112.177.2 (ဆွေးနွေး) ၁၆:၄၀၊ ၃၁ မေ ၂၀၁၈
၁၀၁ ရက်, ၄ hours နှင့် ၄၁ minutes left Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) anon. only, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
၀၂:၂၁၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၇ Rohingya are Rohingya, not Bengali (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၂:၂၀၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၇ Rohingya are humans, not dogs and rubbish (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၂:၂၀၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၇ Stop killing Rohingya people (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၂:၁၉၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၇ Real Buddhists don't kill innocent Rohingya people (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၈:၄၆၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၇ 95.89.17.205 (ဆွေးနွေး) ၀၈:၄၆၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၈
၉၈ ရက်, ၂၀ hours နှင့် ၄၆ minutes left Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) anon. only, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်
၀၁:၂၂၊ ၆ မေ ၂၀၁၇ 45.112.176.136 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) anon. only, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၂:၀၉၊ ၅ မေ ၂၀၁၇ Myanmar Soccer Light (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု
၁၅:၂၁၊ ၃ မေ ၂၀၁၇ နိယြက်ားင့လာအပ္တယ္လက္ခံေလ (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၁:၁၀၊ ၃ မေ ၂၀၁၇ 1.47.106.52 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၅:၅၅၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၇ Sithukoirala (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၀၅:၅၅၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၈
၆၅ ရက်, ၁၇ hours နှင့် ၅၆ minutes left Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၅:၅၃၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၇ Tin Aung (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၁:၂၄၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၇ Han Thi 25 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၁၄:၂၇၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Fucking shit (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၁၄:၁၀၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Ei Shwe Sin Tun (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၁:၀၀၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Mr Steven Dawson Rodriguez (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၀:၅၉၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Samaret moha Adu (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၁၆:၁၂၊ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၁၇ Myanmar Lovers Group (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၁:၁၃၊ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၁၇ Mr salat Mohamed radi (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၁၅:၀၁၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ Mr Steven Dawson (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၈:၃၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ Ronaldo Dos Santos (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၀:၁၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ Isco Cristia (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၀:၁၃၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ Segio lopez (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
၁၇:၄၁၊ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr sofia rodriguez (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၁:၁၆၊ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၇ Steven Salat (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
၁၄:၃၈၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Thawmas Mulian (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
၀၉:၄၈၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Steven Dawson (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု: Special:AbuseFilter/8
၀၉:၄၈၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Su San Nora (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု: Special:AbuseFilter/8
၀၁:၅၉၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Irina Saligomez (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၁:၅၉၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Sanches (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၁:၅၉၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Tokiyo (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၀၁:၅၈၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Rodrio petric (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၁၄:၂၅၊ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၇ Forsica Karim Lopez (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၁၆:၄၄၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၇ DR al mohamed ali (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု: Special:AbuseFilter/8
၁၅:၁၆၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၇ Ricato Sanches (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
၁၄:၄၁၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၇ Navas ferico (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
၁၄:၁၄၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၇ Foncika gomez (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စာမျက်နှာများကို ဖန်တီးခြင်း: အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
၀၉:၁၄၊ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၁၇ Mr Ramos Aveiro Santos (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
၁၄:၂၇၊ ၉ ဧပြီ ၂၀၁၇ Myanmar Football Federation President (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
"https://my.wikipedia.org/wiki/Special:BlockList" မှ ရယူရန်